महामारीमा मानव अपराध : भारतमा फर्जि कोरोना रिपोर्ट, नेपालमा भ्याक्सिन कमिशन काण्ड ! | Diyopost
कोभिड जस्तो महामारीमा पनि मानवताको रगत चुस्ने पिचास हुने गर्दछ भन्ने प्रमाण भारतको हरिद्वार कुम्भ मेलामा भेटियो । जम्मा चार लाख कोभिड टेस्टमा एक लाख टेस्ट गर्दै नगरि फर्जी विवरण पेशगरि रकम भुक्तानी गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । टाइम्स अफ इन्डियाले जून १७ को यस्तो समाचार सार्वजनिक गरेको हो ।
कोभिड टेस्टको नाममा पनि कसरी घोटाला गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको यो एउटा नमुना मात्र हो । कुम्भ मेलाको बेला कोभिड संक्रमणको अवस्थाप्रति सरकारी वेवास्ताको कारण हाई कोर्टले कडा प्रतिक्रिया दिएपछि उत्तराखण्डको सरकारले जारी गरेको निर्देशन अनुसार उक्त मेलामा कोभिड टेस्ट गर्ने जिम्मा राज्य र ९ वटा प्राईभेट कम्पनिलाई दिइयो । एउटा घटनाले सिर्जना गरेको परिणाम स्वरूप उक्त कम्पनिहरु मध्य एउटा कम्पनिले गरेको स्वाब परिक्षणहरुमा एक लाख भन्दाबढी परिक्षण फर्जी रहेको कुरा उदाङ्गो पार्यो । बाँकी कम्पनिहरुको भूमिका र परिक्षण परिणामहरुको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरिदै छ ।
उक्त फर्जी परिक्षण गर्ने कम्पनिले पेश गरेको विवरणमा नाम, ठेगाना, मोबाईल नंबर र अन्य सबै तथ्य गलत रहेको व्योहोरा खुल्न आयो । यतिमात्र नभई उक्त कम्पनिले पेश गरेको कम्पनिको विवरण जस्तै ठेगाना, टेलिफोन नम्बर पनि गलत रहेको ठहरियो । उक्त झोले कम्पनिलाई ठेक्का दिइएको प्रक्रिया सबै अवैधानिक, त्रुटिपूर्ण र गलत मनसायबाट प्रेरित रहेको तथ्य समेत खुल्न आयो । टेस्ट गर्ने जिम्मा पाएका प्राईभेट कम्पनिलाई मेलाको मुख्य ईलाकाहरुमा स्वाब परिक्षण गर्ने जिम्मा दिइएको थियो तर उक्त कम्पनिले परिक्षणनै नगरि गरेको विवरण पेश गरि लाखौँ रकम भुक्तानी लिएको कुरा अनुसन्धानबाट खुल्न आयो ।
पन्जाबको फरीदकोटमा बस्ने विपन मित्तल नाम गरेको एकजना एलआईसी एजेण्टको मोबाईलमा २२ अप्रिलमा एउटा मेसेज आएछ । उक्त मेसेजमा उनको स्वाब परिक्षण गरिएको र नेगेटिभ रिपोर्ट आएको सन्देश रहेछ । जबकी उनले यसप्रकारको कुनै टेस्ट गराएकै थिएनन् । एउटा सचेत नागरिकको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै विभिन्न सरकारी कार्यालय मार्फत अनुसन्धान थालेपछि यो परिक्षण हरिद्वार कुम्भ मेलासँग जोडिएको तथ्य भेटियो । उनको स्वाब परिक्षण गर्ने फर्जी ल्याबबाटै यस्तै अन्य एकलाख जनाको फर्जी स्वाब परिक्षण गरिएको विवरण पेश गरिएको रहेछ ।
उत्तराखण्ड उच्च अदालतको निर्देशनको पालना गर्दै १ अप्रिलदेखि ३० अप्रिलसम्म प्रत्येक दिन कम्तिमा पचास हजारको स्वाब परिक्षण गर्ने कार्य राज्य सरकारले ९ वटा निजी कम्पनिहरुलाई लिएर शुरु गर्यो । उक्त समयमा कोभिड संक्रमण र मृत्युदर आफ्नो उच्चतम अवस्थामा थियो । कुम्भ मेला चलिरहेको क्षेत्रभरी गरिएको उक्त तथाकथित स्वाब परिक्षणको रिपोर्टमा संक्रमणको दर २.८ रहेको भनिएको थियो । जबकी हरिद्वारको अन्य ठाउँहरुमा संक्रमण दर १४.२ थियो । धर्मप्रति असिम आस्था राख्ने आम जनसाधारण यसबाट झन लापरवाह हुन पुगे । यो घटनाबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ कि वास्तविक तथ्यलाई लुकाएर देश र मानवताप्रति कतिसम्मको अक्षम्य अपराध गरिएको रहेछ ।
विपन मित्तलले हरिद्वारको जिल्ला प्रशासन र स्वास्थ्य अधिकारीसँग सम्पर्क गर्दापनि प्रतिक्रिया नपाएपछि ‘इन्डियन काउन्सिल आफ मेडिकल रिसर्चलाई’ यसबारे लिखित जानकारी गराए । सुचनाको हक अन्तर्गत कुन ल्याबमा उनको तथाकथित स्वाब परिक्षण गरिएको रिपोर्ट तयार पारिएको हो भनि जानकारी मागे । परिणामस्वरूप आईसीएमआर (ईन्डियन काउन्सिल आफ मेडिकल रिसर्च) ले गरेको अनुसन्धानपछि यस घोटालाको पर्दाफास भयो ।
अनुसन्धानको क्रममा उक्त निजि कम्पनिले ठेक्का लिनकालागि उत्तराखण्ड स्वास्थ्य विभागलाई पेश गरेको विवरण र दिल्ली अवस्थित ठेगाना समेत गलत रहेको खुल्न आयो । टाईम्स आफ ईन्डियाको प्रतिनिधिले गरेको स्थलगत निरीक्षणमा उक्त कुरा पुष्टि हुन आयो ।
हरिद्वार स्वास्थ्य विभागलाई उक्त कम्पनिबाट पेश गरिएको प्रपोजल विभागले प्रारम्भिकरुपमा रद्द गरेको कुरा टाईम्स आफ ईन्डियाले गरेको अनुसन्धानमा खुल्न आयो । किनभने उक्त कम्पनिलाई आईसीएमआरबाट प्राप्त हुनु पर्ने मन्जूरी प्रमाण पत्र थिएन । यस्तो अवस्थामा उक्त कम्पनिलाई मेला प्रशासन वा मेला स्वास्थ्य अधिकारीबाट कसरी ठेक्का प्राप्त भयो र त्यसको पछाडी कसको निर्देशन थियो अहिले अनुसन्धानको विषय भएको छ । बिना टेण्डर उक्त कम्पनिलाई कसरी काम दिइयो र विगतमा राज्यसँग यस प्रकारको काम गरेको कुनै पुर्व अनुभव नहुँदापनि किन उक्त कम्पनिलाई यत्रो ठूलो जिम्मेवारी दिइयो ?
यसअघि पनि बिहार प्रान्तमा यस्तै फर्जी टेस्ट गरिएको जानकारी समाचारमा आएको थियो । यस्तो संवेदनशील विषयमा पनि समग्र मानवता विरुद्ध यस प्रकारको आपराधिक कार्य गर्ने साहस हुन्छ भने त्यसको प्रमुख कारण दण्डहीनता र राजनीतिक संरक्षण हो ।
भ्रष्टाचारको विषयमा दक्षिण एसिया अवस्थित भारत, नेपाल, पाकिस्तान र बंगलादेश उस्ता उस्तै हुन् । यहाँ कुनैपनि विपद वा राष्ट्रिय आपतकाल आइपर्दा कसैको लागि ठुलो अवसर सिर्जना हुन् पुग्छ ।
नेपालमा पनि कोरोना संक्रमणको बेला विभिन्न काण्डवारे सुन्न पाईएको छ । भ्याक्सिन अहिलेसम्म आउन सकेको छैन । कमिशनकै खेलका कारण भ्याक्सिन रोकिएको तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्रीले नै सार्वजनिक गरेका थिए । भ्याक्सिनमा भएको कमिशन काण्डबारे शुरुमा निकै हल्ली खल्ली मच्चियो । तर, समयसँगै यो पनि अहिले सेलाएको छ । भ्याक्सिन लगाउने प्रक्रिया अहिलेसम्म अत्यन्त सुस्त छ ।
विज्ञहरुले प्रदेश सरकारलाई पनि विदेशबाट आफै भ्याक्सिन ल्याउने अधिकार दिइनुपर्छ भन्दा पनि किन विलम्ब भई रहेको छ र किन प्रदेश सरकारहरुलाई आजसम्म यो अधिकार दिइएको छैन ? भाक्सिन डिप्लोमेसीमा राजदूतहरुको भूमिका किन सुनिन्न र पढ्न पाईन्न ? यो कृपावाद र आफन्तवादको नतिजा हो । घोटाला भएको जानकारी पाउदा जसरी विपन मित्तलले पर्दाफास गरे त्यस्तै नागरिकको भूमिका हामीले पनि निभाउनुपर्छ । साथै रेखदेख गर्ने निकायहरुले सजगता पुर्वक आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ ।
यदि सिस्टम भ्रष्ट छ, त्यसको संरक्षकहरुसम्म दलालहरुको पहुँच छ र घोटालाको एकपछि अर्को शिलशिला चलिरहेको छ भने यो वास्तवमै अत्यन्त सोचनीय र चिन्ताजनक विषय हो ।